မြေတန်ဖိုး (Short-clip) – Land in Our Hands
မြေ တန်ဖိုးရှိလားလို့ မေးတဲ့အခါ “တန်ဖိုးရှိတာပေါ့” လို့ အားလုံးကဖြေကြပါတယ် . . . ဘယ်နေရာမှာတော့ မြေတစ်ကွက်ကို ဘယ်လောက်တန်တယ် . . . ဘယ်မှာတော့ဖြင့် လယ်တစ်ဧကကို ဘယ်လောက်တန်တယ် ဆိုတာမျိုး ဖြေလေ့ရှိကြပါတယ် . . .
မြေမှာ ငွေကြေးနဲ့တိုင်းတာလို့မရတဲ့ တန်ဖိုးတွေရော ရှိပါသလား???
မြေနဲ့ လူ့အသိုက်အဝန်းနဲ့ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေပါသလဲ??
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျေးလက်နေလူဦးရေက ၇ဝ% ဖြစ်ပြီး ကျေးလက်နေသူအများစုက မြေကိုမှီတည်ပြီး အသက်ရှင် ရပ်တည်နေရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသအသီးသီးက မတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် မြေကို လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးပြီး ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရ စီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုခဲ့ကြတာဟာ ယနေ့ခေတ် ဥပဒေတွေမပေါ်ပေါက်ခင်တည်းက ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသများက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုမှုပုံစံဟာ ပင့်ကူလက်တံများသဖွယ် ယှက်နွယ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ “လူ၊ သစ်တော၊ မြေအရင်းအမြစ်” ဆိုတာတွေကို သီးခြားစီ ခွဲထုတ်မရနိုင်ပါ။ တစ်ဦးချင်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ မကပဲ လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံး၏ အကျိုးစီးပွားများ ယှက်နွယ်ပါဝင်နေသည်။
စိုက်ပျိုးရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ “မြေ”ဆိုတာ နေစရာရရုံ၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ သမိုင်း၊ ဖြစ်တည်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အချုပ်အခြာ . . . စတဲ့ တန်ဖိုးများစွာနှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိပါတယ်။
* မြေသည် ရောင်းကုန်မဟုတ်။
* မြေသည် လူမျိုးစုအသီးသီး၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
* အမွေဆက်ခံခြင်းနှင့် အောက်မေ့သတိရခြင်းဖြစ်သည်။
* ပြည်သူတို့၏ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်တိုကြားမှ ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။
* မြေသည် အချုပ်အခြာအာဏာဖြစ်သည်။
YOUTUBE Channel of LIOH:
Facebook Page of LIOH:
Author lioh-adminPosted on ဇူလိုင် 26, 2020 ဒီဇင်ဘာ 2, 2020 Categories IECTags IEC, Value of land
Previous Previous post: မြန်မာဘာသာဖြင့် မရနိုင်သေးပါ
Next Next post: အမျိုးသားမြေဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်(မူကြမ်း)အပေါ် ကရင်နီအရပ်ဘက်အဖွဲ့များ၏ သဘောထားရပ်တည်ချက် (စက်တင်ဘာ ၂ဝ၂ဝ)
မှတ်တမ်းများ လ ရွေးပါ ဇူလိုင် 2021 ဇွန် 2021 မတ် 2021 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2021 ဒီဇင်ဘာ 2020 အောက်တိုဘာ 2020 စက်တင်ဘာ 2020 ဇူလိုင် 2020 ဇွန် 2020 မတ် 2020 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2020 ဇန်နဝါရီ 2020 နိုဝင်ဘာ 2019 ဩဂုတ် 2019 ဇူလိုင် 2019 ဇွန် 2019 ဧပြီ 2019 မတ် 2019 ဇန်နဝါရီ 2015 အောက်တိုဘာ 2014